ဟေ့….သူခိုးလေးတွေ မင်းတို့ စောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြတော့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဟေ့….သူခိုးလေးတွေ မင်းတို့ စောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြတော့
ဟေ့….သူခိုးလေးတွေ မင်းတို့ စောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြတော့
Posted by တေလေ on Jul 31, 2011 in Copy/Paste | 26 comments
ငါတို့ဆီကို မင်းတို့ရောက်လာခါစ ကတော့ မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အဝတ်ထည့်အိတ်လေးတစ်ခု
ထင်းရုးသတ္တာလေး တစ်သတ္တာ ၊ အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါ ကုန်တင်ကား တစ်စီးတိုက်အပြည့်နဲ့
ဟုတ်ပါပြီ ထားပါတော့ ၊
ငါတို့မြှို့တိုးတက်ဖို့ မင်းတို့ ဘာတွေများလုပ်ခဲ့ပါသလဲ ၊ ဘာတွေတိုးတက်ခဲ့ပါသလဲ ၊ မတိုးတက်မဲ့အပြင်
မင်းတို့ အေးဓမြ တိုက်လို့ မွဲတေပြီးကျန်ခဲ့သူတွေ က ဒုနဲ့ဒေး ကွ ၊
ပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ပေးပြီးပြည်သူတွေ လုပ်စာထိုင်စားနေတဲ့ မင်းတို့တွေ က များ ပြည်သူတွေကို
ထမင်းပြန်ကျွေးရတဲ့ပုံစံနဲ့ စောက်ခွက်တွေက မာကျောလိုက်တာဗျာ ၊
မင်းတို့တွေရဲ့လည်ချောင်းထဲမှာ ခြေမနဲ့ ကလော်ထုတ်ရင်တောင် မင်းတို့မျိုထားတဲ့ ထမင်းတွေ
အလုပ်အကိုင်လေးများရှားပါးလို့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် TAXI လေး တစ်စီး ထောင်မိပါတယ် ၊ အမလေး လေး
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး(ထွန်းဝေ) ကို ငါးသိန်း တဲ့ ၊
နာမည်ကျော် ကပ်ဖား မထသဥက္ကဋ္ဌ (ထွန်းသန့်ကျော်) ကို နှစ်သိန်း တဲ့ ၊
TAXI အသင်းကို နှစ်သိန်း တဲ့ ၊
အားပါးပါး များလိုက်တာဗျာ ၊
ဒါတောင် မနှစ်က စုစုပေါင်း ဆယ့်နှစ်သိန်း တဲ့ ၊ ဒီနှစ်မို့လျော့တာဆိုပဲ ၊
ပြောရအုံးမယ် ခရိုင်မှုးကို ပေးရတဲ့ ငါးသိန်းက ဘာလုပ်သလဲ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီလိုပဲ စရင်းပျောက်သွား
တာ လို့ သိရတယ် ၊ ( ဟိုဟာပြင်တယ် ဒီဟာဝယ်တယ် စရင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာ)
မထသဥက္ကဋ္ဌ ဆီရောက်သွားတဲ့ နှစ်သိန်းရောဆိုတော့ အရာရှိမင်းကြီးတွေ အာဏာရှင်ကြီးတွေ အတွက်
ဧည့်ခံ စရိတ်ပါ တဲ့ ၊
အသင်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့ နှစ်သိန်းကျတော့ ဘဏ်ထဲ ထည့်ထားပါတယ် တဲ့ ၊
အမှန်က ဖြစ်စေချင်တာတော့ ဒီလိုရရှိထားတဲ့ ငွေ တွေက အဖက်ဖက်က မပြည့်စုံတဲ့ သံတွဲမြို့လေး
အတွက် တစ်နေရာရာ အထောက်အကူဖြစ်စေချင်တာပါပဲဗျာ ၊
ဒီကောင်တွေ က တော့ အရက်ပုန်းဆိုင် စရင်းကောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေကို ဆက်ကြေး
ကောက်ခိုင်းတယ် ၊ ငါးဖမ်းလှေစရင်းတွေဆီက ဆက်ကြေးလဲ စရင်းနဲ့အတိအကျပေးရသေးတယ်ဗျ ၊
နွားလှေတစ်စီး ပင်လယ်ထဲကိုထွက်ရင် ခရိုင်မှုးကို သုံးသိန်း၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကို နှစ်သိန်း တဲ့ ၊
သစ်လှေတစ်စီးထွက်ရင်လဲ ဒီနှုန်းအတိုင်းပဲ တဲ့ ၊ အဖက်ဖက်က တောင်းစား ( အေးဓမြတိုက်) နေ
တော့တာ ၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ရတဲ့ငွေ တွေက ငါတို့မြို့အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရောက်သွားတာတော့
ပြောပြချင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ၊ ခြုံငုံပီးတော့ ပြောပြခြင်းပါ ၊
ဟေ့…သူခိုးလေးတွေ ..သတိထားပြီးနေကြတော့..မင်းတို့စောက်ကျင့်တွေ ပြင် ဒါပဲ ။
ခိုးရာကနေ ဓမြ တိုက်တော့တာပဲ
သူတို့တွေက ဒီခေတ်ရဲ့ အထက်တန်းလွှာတွေလေ..။
အဝီဇိ ကိုဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဆင်းကြတော့မယ့် သူတွေပါ…။
အဲ့ဒီ ကောင်ကြီးတွေက ပုတီးကြီးတစ်ဖါးဖါး ကိုးယို့ကားယားတွေပါ…။
Pyinlepyaw ပြောတာ တစ်ခုကျန်တယ် လို့ထင်ပါတယ်…။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး သူခိုး မြတ်ကျော်က မှ နာမည်ကြီး ဗျ…။
သူ့ဆီကို သွားစကားပြောရင် စာအိတ်လေး မြင်မှ လှည့်ကြည့်တတ်တဲ့ အေးဓမြ…။
မြတ်ကျော် ဆိုတာ ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့ နယ်ကပြောင်းလာတဲ့မြတ်ကျော်လားဗျ၊အဲ့ဒိကောင်ဆိုရင်တော့သူခိုးလို့ မပြောပါနဲ့ ဗျာ၊သူကဓားပြအကြီးစားပါ၊တိုက်ကြီးတမြို့ လုံးသိပါတယ်။
ခင်ဗျား အောက်က ရေးနေတဲ့ မိန်းမနာမည်နဲ့ယောင်္ကျားက မြတ်ကျော်နဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲ အုပ်စုတူတွေဗျ..
taicun ရေ ..ခင်ဗျားက သိတဲ့သူမို့ …ဒီ ကျားလိုလို မလိုလို က ဘယ်လိုလူစားမျိုးဆိုတာ ခင်ဗျား သိ
ခင်ဗျားသိတဲ့ ထွေအုပ်က မြတ်ကျော်က ဒီမြို့မှာ ကြီးပွါးနေပီဗျ..
အင်းပေါ့လေ ဓါးမြအကြီးစား ဆိုတဲ့နောက်တော့…ကြီးပွါးချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာ….
အော် ကျန်နေသေးလို့ …
အဲ့ဒီ maythakhin က ရွာသူရွာသားတွေ အထင်လွဲအောင် ကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ တစ်ဖက်လှည့်ပီးတိုက်နေသေး
ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး …တစ်ခြားစီ….တော်တော် ယုတ်တဲ့လူပဲဗျာ…
ဓားပြတိုက်တာတင်တော်တာမဟုတ်ဘူးဗျ၊လိမ်တဲ့နေရာမှာလည်းဆရာကြီးရယ်ပါ၊အခုဝန်ကြီးချုပ် ဦမြင့်ဆွေ ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုးဘ၀တုံးက တိုက်ကြီးမြို့ နယ် တော်လတီ စံပြကျေးရွာ ဖွင့်ပွဲမှာ ရွာကအိမ်အလွတ်တလုံးကို မိခင်နဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတို့အမျိုးသမီးရေးရာတို့ဆိုင်းဘုတ်ကောက်တတ်ပြီးတော့ ဦးမြင့်ဆွေလည်းပြန်ရော ဆိုင်းဘုတ်တွေပြန်ဖြုတ်တာဘဲ၊ဘတ်ဂျတ်တော့ရလိုက်တာပေါ့ဗျာ၊ရွာကလူတွေကဦးမြင့်ဆွေကိုသနားနေကြတာဗျ၊tv မှာတောင်အဲ့ဒိလိမ်ပွဲကြီးပါလာလို့ ရွာမှာ ဟာသ တခုဖြစ်သွားသေးတယ်၊ခင်ဗျားတို့ ဆီပြောင်းလာရတာက တိုက်ကြီး မြို့ ပေါ်မှာဘောလုံးပွဲလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်တွေရောင်းစားပြီးလိမ်တာရယ် သူ့ မိန်းမကုလားမ သေတော့ အုတ်ဂူ ကိုခြံစည်းရိုးခတ် အမိုးမိုးပြီးတော့နန်းတော်လိုလုတ်ထားတာရယ်၊နောက်ပြသနာပေါင်းစုံကို လူငယ်တွေက internet ကနေ ဖွ လို့ ပြေးရတာဗျ၊ပြေးတာကောင်းကောင်းမပြေးဘူး တိုက်ကြီးက ကောင်မတယောက်ကို မ သွားတယ်ဗျာ၊သူပြေးတော့တိုက်ကြီးမြို့ သူမြို့ သားတွေဆုတောင်းပေးကြတယ်ဗျာ၊ ကာလနာတိုက်သေပါစေ…..လို့ ။
မြို့ပေါ်အတွက်ကောင်းတာလုပ်နေတာလား။ မြို့ပေါ်ကလူထုကို ဒုတ်ခရောက်အောင်လုပ်နေတာလား။ နင်တို့အားလုံးတဖွဲ့တည်းပဲ အလုပ်မရှိအားအားယားယား လက်ိဖက်ရည်ဆိုင်ပြီး သူများစောက်တင်းပြောနေတဲ့ကောင်တွေ။အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိန်းမဖြစ်လိုက် ယောက်ကျားဖြစ်လိုက်နဲ့။
နင်တို့ကြံ့ခိုင်ရေးကလွဲရင် ကျန်တာဘာအသင်းမှမကောင်းဘူးပေါ့။ နင်တို့ နင်တို့စေတနာ အကျိုးပေးချိန်ရောက်တော့မယ်။ နင်တို့ မကြောက်ဘူးလား။ နင်တို့ လုပ်ရပ်တွေ နင်တို့ကို သဘာဝတရားကြီးက ဒါဏ်ခေတ်လိမ်မယ်။
မေသခင် တဲ့.. လုပ်ပြန်ပါပီ….
သူ့ကိုယ်သူ မလုံ ဖြစ်တိုင်း ဟိုလူ့ထင် ဒီလူ့ ထင်ဖြစ်နေရှာပီ…သနားလိုက်တာကွာ…
ဘယ်က နေပီးကြံ့ခိုင်ေ၇းကပါလာတာတုန်း ကောင်မရဲ့
ဒီနာမည်သုံးပီး ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ လှည့်တိုက်နေပြန်ပီ
တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေး ဟုတ်ပါဘူး ကောင်မလေး
အရင်ကတော့ မယုံခဲ့ဘူး ခုတော့ လူယုတ်မာမှန်း သိရပီ
အယင် က ကောင်းမြတ် 88 နဲ့ ခုတော့ မေသခင် လား မေသက်ခင်လား လုပ်လာပြန်ပီ
ဟိုတစ်ယောက်က သူ့ဖာသာသူအေးဆေးနေတာ သူတော်ကောင်းကိုပစ်မှားတဲ့ နင်ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ ဟဲ့
“ဟိုတစ်ယောက်က သူ့ဖာသာသူအေးဆေးနေတာ သူတော်ကောင်းကိုပစ်မှားတဲ့ နင်ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ ဟဲ့” ဟိ ဟိ
ရှင်းအောင်ထပ်ပြောလိုက်မယ် မေသခင်သည် ကပ်ဖားမဟုတ်ပါ။ မေသခင်သည် မေသခင်သာဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါပီ ..မေသခင် က သူမဟုတ်မှန်း…
မေသခင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိပါပီ…
ကိုယ့်စီးပွါးရေး ကို ပဲဂရုစိုက်ပါ..
သေချာ မသိပဲနဲ့ ဇက်ဝင်ခံ နေပါနဲ့..
သူများ မြှောက်ပေးတိုင်း.. net လုပ်ငန်းက ရှော့ရှိတယ်…
နက် ဆိုင် ကဆိုတော့….. ၄ ဆိုင်ထဲက ၂ ဆိုင် ရွေးရမယ်…၂ ဆိုင်ထဲက ဆိုတော့ …
ဟိဟိ…အပျိုကြီးမမလေး ပါလား…တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ချဉ်းကပ်ရတော့မှာပေါ့လေ…
အားလုံးသော မြို့သူ မြို့သားတွေမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီကိုယ်ငှနဲ့ ပါ မမမေသခင်။ဘယ်သူ မှအားနေယားမနေပါဘူး။မိမိခံစားချက်နဲ့ မိမိအမြင်ကို အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း ရင်ဖွင့်တိုင်တန်းလို့ မရသေးတော့. အွန်လိုင်းမှာ post တင်တာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါ ။သဘာဝတရားကြီးက ဒဏ်ခတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။အကြွင်းမဲ့လက်ခံပါတယ်။လောလောဆယ် လီဆယ်ပြောနေတာလေးတွေ ကိုခဏရပ်ပြီး ခြုံထားတဲ့ သိုးအရေခွံလေးခွာကြည့်ပါအုံး။ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်တွေးပါ. ငါဟာအကောင်းမြင်လားအဆိုးမြင်လား။ပြီးတော့ MG ရွာကို လာလည်ရင် ရိုင်းပျမှုကိုရှောင်ပါ။စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံဂရုစိုက်ပါနော့
ဒါပေမယ့် ပိုပြီး ဆိုလားရင်ကော
ပိုပီးဆိုးလာရင် လဲ မြို့သူမြို့သားတွေပဲ ခံရမှာပေါ့ဗျာ…။
What is နွားလှေ ???
A boat carryingacow or
A boat carryingaillegal immigrant ???
အကောင်းဆုံးကတော့ .. အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေမှန်သမျှ ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေပဲ.. အဲဒီအဖွဲ့စည်းတွေပဲ ပြည်သူတွေထဲမှာ ဆရာကြီးတွေလုပ်နေတာ .. ဘယ်သူ့အဖေခေါ်ရမှန်းမသိအောင်လုပ်နေတာ အဲဒီအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကို စိတ်နာတယ် ..
နွားလှေ ဆိုတာက ..
ဘင်းဂလားဒေ့ခ်ျ ကို သွားပို့တဲ့ နွားကုန်သည် လှေ ကိုပြောတာပါ..
ရခိုင်ပြည်နယ် က နွားတွေ လိုက်ဝယ်ပီးတော့ ဘင်းဂလားဒေ့ခ်ျ ကို သွားရောင်းတာပါ..
အဲဒီမှာ ဒီကောင်တွေ အကွက်ပေါ့…သောက်သောက်လဲ အေး ဓမြ တိုက်တော့တာ….
နွားက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ပြန်မွေးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်၊ သစ်ပင် ကပိုဆိုးတာ၊ သစ်တွေခိုးခုတ်ပီး
နိုင်ငံခြားကိုရောင်း၊ ခုတော့ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီး လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ ရာသီဥတု ဒဏ် ခံနေကြရပီ၊
ဂွ ရိုးလမ်းတွေ တောင်ကုတ် ပဲခူးရိုးမတောင်တွေမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေမရှိတော့လို့ တောင်ပြို မြေပြို တွေ
ဖြစ်ပြီး အားလုံး ဒုက္ခ ရောက်နေကြရပီ၊
သစ်သမားတွေရဲ့ ဝိသမလောဘ၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာရှင်တွေက ငါဖို့ရရင်ပီးရောလုပ်နေတာတွေကြောင့်
လမ်းတွေ တံတားတွေ ပျက်စီးလို့ ကားတွေ ပြောင်းနေကြရတော့ ကားစီးခ ၊ ကုန်တင်စရိတ်တွေ ပိုပီးမြင့်
မားလာလေတော့ နောက်ဆုံး ပြည်သူတွေပဲ အခက်တွေ့ကြရတော့တာပေါ့ဗျာ။
အောက်ခြေမှာ ပျက်နေတာကို အပေါ်ကမသိရင် အပေါ်ကလူလည်း ညံ့လို့ပဲ။
ပေါင်းစားနေလို့လား ညံ့နေလို့လား တစ်ခုခုပဲ
မှန်ပါတယ် ကိုလင်းဝေကျော်—- ခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ ပေါင်းပြီးခိုးစားဖို့ သိပ်မလွယ်တော့ပါဘူး။အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်းအပေါင်းမခံတော့ပါဘူး။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ မိရင် ထမင်းအိုးလေးကွဲမှာကြောနေရပါပီ။သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သန့် ရှင်းသောအစိုးရတကယ်ဖြစ်ဖြစ်စောင့်ညြ့်ရပါမယ်။ဝိုင်းဝန်းလည်းအားပေးရပါမယ်
တောက်!ပြောတော့ဒီမိုကရေစီ…တဲ့ ဂျပန်ခေတ်ကပေးတဲ့ ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဘာမှမခြားဘူး။
အရင်က နအဖ အခုသိန်းစိန် *ငါ့အမျိုးကောင်းစားရေး* အဖွဲ့ဝင်တွေချည်းပဲ။ အောက်ကလဲစားတယ်။ အေးဓါးပြ တိုက်တယ်။ အပေါ်ကလည်း ၀ါး တယ်။ ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်။ ပုဒ်မလေး ပေးမှလုပ် သောက်ကျင့်တွေ ဒို့လူမျိုးတွေအပေါ် ဗိုင်းရပ်ပိုးလို တွယ်ကပ် နေပြီ..။ နောက် ဘယ်ကောင်တက်တက် ဒီသောက်ကျင့်တွေ ပြန်ပြင်ဖို့ က နှစ် ၅၀ လည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူး နှစ် ၁၀၀ လည်း လောက်မှာမဟုတ် ဘူး။..။
အာဂ ပြောတာလေးကမဆိုးပါဘူး။ဒီကျင့်တွေပြင်ဖို့ နှစ်၅၀ လဲမလိုပါဘူး၊နှစ်၁၀၀ လဲမလိုပါဘူး။တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်ရမှာပါ။အမှန်အကန်လုပ်ကြဖို့ ဘဲ လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုယ်စီ မလို မုန်းတီး အမြတ်ကြီးစားခေါင်းပုံဖြတ်နေကြတာလေးတွေကို ခဏရပ်ပြီး. နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီထင်ပါတယ် ရှင်။
“ပြောရအုံးမယ် ခရိုင်မှုးကို ပေးရတဲ့ ငါးသိန်းက ဘာလုပ်သလဲ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီလိုပဲ စရင်းပျောက်သွား
ဧည့်ခံ စရိတ်ပါ တဲ့ ၊
အသင်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့ နှစ်သိန်းကျတော့ ဘဏ်ထဲ ထည့်ထားပါတယ် တဲ့ ၊”ခု ပင်လယ်ပျော်ရေးထားတာ့အပြင် သူတို့ တွေအုပ်စုလိုက်. သူများငွေတွေနဲ့ ဆိတ်အကောင်လိုက်စား၊ဝိုင်းဖွဲ့ အရက်သောကိကြတာတဝုန်းဝုန်း တအုံးအုံးဆိုပါလား။သုံးဘီး တက္ကစီပိုင်ရှင်များ များကလဲဒေါသတထောင်းထောင်းပါတဲ့ရှင်